Amaxabiso Best Ngezaphulelo Kagqirha Kunye Amatikiti, Ibhlogi Malunga Iluncedo Kakhulu., Eyenkanga 2021
Impilo-Ntle Imfundo Yezempilo, Impilo Uluntu, Inkampani Imidlalo Enzima Inkampani, Iindaba Imfundo Yezempilo Imidlalo Ekuhlaleni Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Ulwazi Lweziyobisi Iindaba, Impilo Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba Inkampani, Ukuphuma Iindaba Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi
Imibuzo eyi-8 oza kuyibuza xa ukhululwe esibhedlele
Ukhululwa esibhedlele? Buza le mibuzo isi-8 ngaphambi kokuba utyikitye amaphepha okukhutshwa esibhedlele ekupheleni konyango lwakho lwangaphakathi.
Yintoni ekufuneka uyazi malunga notshintsho lweMedicaid kulo nyaka
Abaxhamli kufuneka balwazi utshintsho kwiMedicaid kulo nyaka naphakathi kobhubhane we-coronavirus. Nantsi into ekufuneka uyazi malunga notshintsho lweMedicaid yowama-2020.
IGlucagon generic iphumelele ukuvunywa yi-FDA
Abantu abanesifo seswekile bangaqala ukonga imali ngenaliti yeglucagon. I-FDA yamkela i-glucagon generic ngo-Disemba ka-2020, eya kufumaneka ekuqaleni kuka-2021.
Ugcino lweSingleCare ngoku luyafumaneka eBrookshire's
Ngoku ungasebenzisa amatikiti e Brookshire kwimigqaliselo. Faka ikhowudi yakho ye-zip kwaye ukhangele i-Rx yakho kwi-SingleCare ukufumana ikhemesti ye-Brookshire kufutshane nawe.
Iivithamini eziBalaseleyo zaBantwana ezi-5: Thelekisa, Thenga kwaye ugcine
Eyona nto ibalulekileyo: Uninzi lwabantwana alufuni ukwazi ukuba bathatha iivithamini. Thelekisa ezona vummiest kunye neevithamini ezilungileyo zabantwana oya kuthi uzivume apha.
Ulawulo lwamayeza kwizigulana ezinomhlaza kunye nabagcini
Ulwazi olubalulekileyo kwizigulana ezinomhlaza kunye nabakhathaleli babo ngendlela yokujongana namayeza anamandla omhlaza. Iingcebiso ngokugcina ngokufanelekileyo, ukusetyenziswa ngokufanelekileyo, kunye nokulahlwa okukhuselekileyo.
Ungayithatha njani inxaxheba kwi-Great American Smokeout
UMark Nov. 19 kwikhalenda ukukhaba umkhwa ngokulungileyo. YiAmerican Cancer Society's Great American Smokeout, kunye nexesha elifanelekileyo lokuyeka ukutshaya.
Funda ngobungozi bokuba likhoboka lesiraphu sokukhohlela
Isiraphu yokukhohlela yenye yezona ndlela ziqhelekileyo zokwakha amayeza e-counter. Funda nzulu malunga nesiyobisi sesikhohlela kunye nendlela yokuchonga ukusetyenziswa gwenxa kwesiraphu.
I-Pantoprazole vs omeprazole: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
I-Pantoprazole ne-Omeprazole banyanga i-GERD kodwa basebenza ngeendlela ezahlukeneyo. Thelekisa iziphumo ebezingalindelekanga kunye neendleko zala machiza ukufumanisa ukuba yeyiphi engcono.
Unyango losulelo kunye namayeza
Ukuhlala nosulelo lwe-sinus kunokungonwabisi. Ukufunda indlela yokulawula iimpawu zakho ngokwemvelo kunye neyeza kunokunciphisa ukukhathazeka kwakho.
Ukukhetha ibhokisi yokuNyanga ngokuKhanya: Isikhokelo sakho sokuthenga esilula
Njengoko iinyanga ezibandayo zisondela kuthi, baya besanda abantu abaphendukela kwibhokisi yabo yonyango elula. Yeyiphi eyona ilungele wena?
Yintoni iAtivan kwaye isetyenziselwa ntoni?
I-Ativan (lorazepam) yi-benzodiazepine ephatha uxinzelelo kunye nokulala. Funda malunga neziphumo ebezingalindelekanga ze-Ativan kwaye uzithelekise neziyobisi ezifanayo njengeXanax.
Ungayibuyisela njani eluntwini ngexesha leeholide
Ukunceda abaguli yinxalenye yomsebenzi wekhemesti, kodwa ungalusebenzela njani uluntu ngexesha leeholide? Zama ezi ngcamango zili-9 zokubuyisela eluntwini.
Isikhokelo esipheleleyo solawulo lwamayeza kubantu abadala
Ulawulo lwamayeza lubaluleke kakhulu kubantu abadala. Esi sikhokelo, sibhalwe ngegalelo loogqirha, sixhobisa abantu abadala kunye nabanonopheli ngeengcebiso kunye neengcebiso ezinokuthi zenziwe.
Izibalo ze-Autism 2021
Umntwana omnye kwabangama-54 une-autism e-U.S, uninzi lwazo oluchongwa kubudala beminyaka engama-4. Izibalo ze-Autism zonyukile, kodwa ngaba i-autism ngokwenene ingubhubhane?
I-Paxil kunye ne-Prozac inyanga uxinzelelo kunye nokuphazamiseka kwengqondo. Thelekisa iziphumo ebezingalindelekanga kunye neendleko zala machiza ukufumanisa ukuba yeyiphi engcono.
Uhamba njani amayeza afrijiweyo
Ukuba uku-insulin okanye ii-antibiotics ezithile, uyazi ukubaluleka kokuzigcina zipholile. Nazi iingcebiso malunga nokuhamba namayeza afrijiweyo.
I-Adderall: Ukusetyenziswa gwenxa kweziyobisi ezisemthethweni kwiikholeji ziyakhula
U-Adderall waziwa njengesixhasi somsebenzi. Kodwa ukusetyenziswa gwenxa kwamayeza kagqirha-ngakumbi okhuthazayo kuyingozi kwimpilo nakwizifundiswa.
Iimpawu ze-4 unokuba nazo i-cyberchondria kunye nendlela yokoyisa
Rhoqo izigulana zisebenzisa i-intanethi ukuziqonda ngokwakho, ezinokuba yingozi kwaye zibize. Nazi iimpawu ezi-4 zokulumkisa nge-cyberchondria kunye nendlela yokuphula umjikelo.
Iindlela ezi-5 ezimangalisayo zoxinzelelo ezinokuchaphazela umzimba wakho
Ukusuka kwilahleko yeenwele ukuya koxinzelelo, uxinzelelo luchaphazela ngaphezulu kwengqondo-lude lubangele nentlungu emzimbeni. Zama ezi ndlela zokuhlangabezana nengxaki ngaphambi kokuba uxinzelelo luchaphazele umzimba wakho.
Ingaba udakumbile? Ulufuna nini unyango lokuphazamiseka okwenzeka ngamaxesha athile onyaka
Ukuphazamiseka kokuchaphazeleka kwamaxesha kuchaphazela isiqingatha sesigidi sabantu e-US minyaka le, ngesiqhelo ukuwa kunye nobusika. Kukho iindlela ezininzi zokonyango.
Ungakuphatha njani ukulunywa kunye neziluma zasehlotyeni
Ukulunywa kwe-bug kunokubangela iimpendulo ezingathandekiyo, njengokuhlaba, ukudumba, okanye ukurhawuzelela. Kukho iindlela zokuphepha ezi zinambuzane zasehlotyeni kwaye ufumane ukukhululeka kwe-bug.
Ngaba umntwana wakho uchazwa gwenxa nge-ADHD?
Kukho iimpawu ezahlukeneyo ze-ADHD ebantwaneni, ezenza kube lula ukungaziboni okanye ukudida nezinye iimeko. Nantsi indlela yokuxelela ukuba ngaba kukuxilongwa gwenxa kwe-ADHD.
I-Zantac vs. Prilosec: Umahluko ophambili kunye nokufana
I-Zantac kunye ne-Prilosec ngamayeza amiselweyo asetyenziselwa ukunyanga i-Reflux. Ngelixa lifanayo, ichiza ngalinye linomahluko walo esiwuthelekisa ecaleni kwelinye.
Isikhokelo sezixhobo zokulala: Zithini izinto onokukhetha kuzo?
Thelekisa izibonelelo zezempilo, iziphumo ebezingalindelekanga, kunye nokukhuselwa kwendalo kunye nokuthengiswa kwamayeza okunceda kunye neepilisi zokulala zokuyalela apha.
Nguwuphi umcimbi ofanelekileyo wobomi kwiinshurensi yezempilo?
Umsebenzi omtsha, umtshato, ukuba nomntwana-ezi ziganeko zobomi ezifanelekileyo zenza ukuba ube nakho ukutshintsha izicwangciso zeinshurensi. Fumanisa ukuba umcimbi wakho wobomi ukuluhlu.
I-7 yeeoyile ezilungileyo ze-CBD zamabala amabala: Isikhokelo somthengi wakho
Namhlanje, iingcali zobuhle ziyazazi izibonelelo zeoyile ye-CBD yamabala amabala. Ukuba unesifo se-cystic acne okanye i-zits ngamanye amaxesha, fumana eyona oyile ye-CBD yamabala ngoku.
ungasusa njani umqala obuhlungu kwangoko
Ipesenti yokutyeba nokutyeba kakhulu eMelika
amayeza esi sifo esixhalabisayo kunye noxinzelelo
amanqanaba eswekile kufuneka abe yintoni kusasa
Ndingayithatha kangaphi i-zyrtec d
zingaphi iimiligram ze-ibuprofen onokuzithatha ngosuku